The 7 Best Coffee Mugs nke 2020 - Ulo
Femina Power Brands International Ahụike Akwụkwọ Mma Agbamakwụkwọ Ntutu Isi #actagainstabuse Idozi Ozugbo Ga-Ahụ Ihe Ndozi
The 7 Best Coffee Mugs, Dị ka Real Caffeine Addicts
Heat na-ekpo ọkụ mmiri gị kpọmkwem ruo 205 Celsius F. Pour jiri nwayọ wụsa ya na ngwakọta Bolivian gị otu na-agbakwunye ma tinye mmiri ara ehi macadamia steamed. Naanị ihe nwere ike imebi emume ụtụtụ gị bụ na kọfị ị hụrụ n'anya dị keara byara site n'oge ị ga-arụ ọrụ. Achọghị ọzọ. Anyị jụrụ ndị ọkachamara ahụ — ndị nwe ụlọ ahịa kọfị abụọ, onye ntụzi nke kọfị kọfị, ọkachamara kọfị ọkachamara na, n’ezie, onye nwere mmasị na kọfị kọfị nke ụlọ — ịkekọrịta iko kọfị ha kacha amasị ha. Ndị a bụ aha asaa ha họọrọ iji mee ka ọ yourụ joe gị na-ekpo ọkụ (ma ọ bụ oyi).
Njikọ: 17 Onyinye maka ndị hụrụ kọfị n'anya ga-amasị ọbụna ndị na-ahụ maka ihe ọ Cụafụ caffeine
1. MiiR gwara mmanụ Travel Tumbler
Ihe kacha mma maka: Akingga ebe dị anya
Nke a bụ ihe kachasị amasị m. Ọ dị oke mma ma, nke ka mkpa, leakproof. Ọ iseasy ọcha na-abịa na a ndụ akwụkwọ ikike. Ọzọkwa, ngwaahịa MiiR ọ bụla a na-ere na-enyere aka inye ego ọrụ ndị a na-enye nke ọma na-elekwasị anya na mmiri dị ọcha, nkwado na mgbasa ozi obodo, kwuru Allie Caran, onye nduzi agụmakwụkwọ na Ndị Kọfị .
2. Ibe Carter N’ebe niile Mug
Ihe kacha mma maka: Mmetụta uto buds
Erika Vonie , otu kọfị nọọrọ onwe ya na kọleji gbaara agbazi Q Arabica (nke pụtara na ọ zụrụ ya maka akara na akara kọfị dabere na tylọ Ọrụ Pụrụ Iche kọfị nke ụkpụrụ America), bụ onye na-akwado iko a nke a na-ekpuchi agụụ. Enwere m mmasị na ị theụ kọfị dị mfe site n'ọnụ ya na egbugbere ọnụ ya. Ime seramiiki anaghị ejidekwa kọfị kọfị ochie, ọ na-emekwa ka kọfị gị dị ọkụ n'oge njem gị niile! ọ raves.
3. KINTO Njem njem
Ihe kacha mma maka: Kọfị nwere akpụrụ mmiri
Uniquedị a pụrụ iche bụ ihe kachasị amasị Caran maka ihe ọ coldụ coldụ oyi (mgbe ọ bụla caffeinated, duh). Ihe mkpuchi a kpọchiri akpọchi na-egbochi ice ịpụ, ya na igwe anaghị agba nchara na-egbochi ihe ọveraụgesụ na-enweghị oke ọkụ ma ọ bụ oyi. Ọ na-abịa dị iche iche mara mma jupụta na agba na imepụta nke pụtara na igwe mmadụ, ọ na-ekwu.
4. MiiR gwara mmanụ Tumbler na Press-On mkpuchi
Ihe kacha mma maka: Ndị na-a coffeeụ kọfị mgbe niile
N’ime afọ iri abụọ gara aga, m nwalere ma ree ọtụtụ tumble ka m nwere ike icheta, ka Ken Nye, onye nwe ya kwuru Itoolu Street Espresso . Ihe kachasị amasị m ugbu a bụ usoro Tumbler site na MiiR. Ọ na-adị oke mma na aka, mkpuchi ahụ dị mma iji si na ya ma ọ na-arụ ọrụ kachasị mma nke dochie iko akwụkwọ ọdịnala, nke bụ isi ihe mgbaru ọsọ nye anyị. Ana m ebu ounce asatọ m na-aga ebe ọ bụla m na-aga.
5. Zojirushi SM-KHE48AG Igwe anaghị agba nchara Mug
Ihe kacha mma maka: Sipping na ọ laa
Onye na - eme ihe pọdkastị nke PureWow na onye kọfị maara ihe kọfị, Matt Bogart, kwupụtara na njem njem a bụ ọkacha mmasị ya niile. Ọdịdị ahụ na-adọrọ adọrọ dị mfe ijikwa, ọ dịkwa mma imetụ aka n'èzí ka ị na-a keepingụ ihe ọ drinkụ yourụ gị n'ime. Mbupụta ahụ na-enwe mmetụta dị ukwuu n'egbugbere ọnụ gị ma nye gị ohere ịnwale okpomọkụ ka ị ghara ire ire gị ọkụ.
6. KLEAN KANTEEN AKW DKWỌ AKW -KWỌ AKW -KWỌ AKW -KWỌ AKW -KWỌ AKW STKWỌ AKWAKWỌ STLỌ
Ihe kacha mma maka: Ndị na-achọ ikpo ọkụ
Na-ahọrọ kọfị gị na-ekpo ọkụ (dị ka, na-ekpo ọkụ)? Mgbe ahụ dị ka Bogart si kwuo, ịchọrọ arịa a. Nke a bụ maka onye chọrọ ịnụ ụtọ kọfị piping ya na-ekpo ọkụ. Dị ka, kpọrọ ihe, nke a bụ maka ndị na-a drinkụ naanị kọfị super, mgbu na-ekpo ọkụ. Edere.
Site na $ 25 na Amazon
7. MiiR gwara mmanụ Cup
Ihe kacha mma maka: Ndị na-aụ nwayọ nwayọ
N'ụzọ doro anya, MiiR bụ akara ọkacha mmasị ndị kọfị anyị. Enwetara m MiiR Camp Cup dị ka onyinye, echekwara m ya kemgbe ahụ. Ọ bụ oke fechaa na a sleek, ntakiri imewe. Okpu a dị mma maka iburu ya n'okporo ụzọ, mana ọbụlagodi na m na-eme kọfị n'ụlọ, enwere m mmasị ị toụ ya na iko MiiR n'ihi na ọ na-eme ka kọfị m dị ọkụ ruo ọtụtụ awa, rave Sahra Nguyen, onye nchoputa na onye isi nke Nguyen Kọfị Nweta , otu ụlọ kọfị Vietnamese nke dabeere na Vietnam.
Njikọ: Mmiri Kachasị Etu Mmiri, si $ 8 gaa $ 95
bara ọgaranya na mkpụrụ osisi protein
Categories Agba Anya Ihe Ndozi Nke Nrụgide
ụwa kacha mma nkiri nkiri
meere ndị ọzọ ihe ọma
lelee ihe nkiri netflix n'ịntanetị
esi kwụsị ntutu daa ma regrow ntutu ndammana ke ufọk